Gogoro3Plus – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 6.2 kW (8.3 ကိုမြင်းကောင်ရေ)
အဆိုပါ Gogoro3Plus အားထိုင်ဝမ်လျှပ်စစ် Scooter အမှတ်တံဆိပ် Gogoro ၏လုပ်ငန်းခွဲကနေလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ် HTC က , ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး smart ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတဦး။
အဆိုပါ3စီးရီး 200000 ကျော်အရာ၏လူကြိုက်များ 1 နဲ့2စီးရီး၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ပါသည်ဘာလင်, ပဲရစ်နှင့်မက်ဒရစ်အပါအဝင်ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာ Scooter ခွဲဝေမှုအစီအစဉ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါ3Plus အား 86 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက် 6,200 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter 4.7 စက္ကန့်အတွင်း 0-50 km / h ထံမှ accelerates ။
အဆိုပါ Scooter နောက်ဆုံးပေါ်တက်စလာကားများ (Panasonic က 2170) တွင်အသုံးပြုသည့်ဘက်ထရီကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းလီသီယမ်ဘက်ထရီအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဘက်ထရီ 170 ကီလိုမီတာထိရောက်သောမောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးများကို 2.5 နာရီအတွင်းတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ3စီးရီးအများပြည်သူအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ဒါဟာ polypropylene လုပ်ထားတဲ့အသစ်တခုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းခန္ဓာကိုယ် shell ကိုထဲကဆောက်လုပ်ထားသည်။ ဒါဟာခြစ်ခံနိုင်ရည်နှင့်ရောင်စုံနီးပါးခိုငျမွဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter အကျိုးရှိစွာ Scooter ခွဲဝေမှုအဘို့များစွာသောတီထွင်မှုပါရှိသည်။ အဆိုပါဒိုင်ခွက်ရိုးရှင်းသောနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအများပြည်သူအသုံးပြုမှုကိုခံနိုင်ရည်ကို လုပ်. , Scooter တစ်ဦးဟိုတယ်အခန်းသော့ကိုကဲ့သို့ခရက်ဒစ်ကဒ်ပုံစံကိုသော့ကို အသုံးပြု. စတင်နိုင်ပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ3စီးရီးချွေဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအများဆုံးနိုင်ငံများရှိအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိကအားစံအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘီးစံယူရိုအရွယ်အစားရှိသည်နှင့်စံတာယာ fit ။ အဆိုပါ Scooter လက်တွေ့ကျကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအများဆုံးပုံမှန်အစည်းအဝေး Scooter ကားဂိုဒေါင်အားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Scooter နှစ်ခုခမောက်ကိုက်ညီသောရဲ့ buddy ထိုင်ခုံအောက်မှာကြီးမားတဲ့ 26.5 လီတာအခန်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter မိုဘိုင်းဖုန်းခွက်ကိုင်ဆောင်သူနဲ့ USB တာဝန်ခံဆိပ်ကမ်းများရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter စစ်မှန်သောမတ် Scooter ဖြစ်ပါတယ် Scooter apps များဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Scooter ကိုအလွယ်တကူသော့မရှိဘဲ Scooter သော့ဖွင့်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောစမတ်လက်ပတ်နာရီအဖြစ် devices များကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။